moi: December 2014
နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ ပြောကြားမည်
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၃၁
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက် ခမ်းနှင့် ဦးဥာဏ်ထွန်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍအသီးသီးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ ၏ နှစ်သစ်ကူး နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုင်ငံတော်အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြချက်များ မီဒီယာများမှ ထုတ်လွှင့်မည်
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ၏ ၂၀၁၄ ခုနှစ် နိုင်ငံတော် အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူသို့ အစီရင်ခံ တင်ပြချက်အား မြန်မာ့အသံ၊ မန္တလေး FM ၊ ပဉ္စပတီ FM ရွှေ FM၊ ချယ်ရီ FM၊ ပတ္တမြား FM၊ FM ပုဂံနှင့် သဇင်အသံ လွှင့်ဌာနတို့မှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ (၁) ရက်နှင့် (၂) ရက်နေ့တို့တွင် မနက် (၇) နာရီ၊ နေ့လည် (၁၁) နာရီ၊ ညနေ (၆) နာရီနှင့် ည (၈) နာရီတို့တွင် တစ်ရက်လျှင် (၄) ကြိမ်စီ နှင့် မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက် ည (၈) နာရီ
(၆၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံ အခမ်းအနားတွင် သတင်းရယူမည့် မှတ်ပုံတင်ထားပြီးသော မီဒီယာများသို့ ပန်ကြားချက်
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁
(၆၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံ အခမ်းအနားသို့ သတင်းရယူကြမည့် သတင်းမီဒီယာသမားများ အနေဖြင့် သတင်းရယူနိုင်ရန်နေရာ (၄) နေရာ သတ်မှတ်ပေးထားပါသည်။
လုပ်ငန်းရှင်းအများစု အွန်လိုင်းကျော်ညာအသုံးပြုမှု မြင့်တက်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ယခုနှစ်အတွင်း အွန်လိုင်းပေါ်တွင် လုပ်ငန်းရှင် အများစုမှာ မိမိလုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကြော်ငြာများကို အွန်လိုင်းပေါ်၌ ထည့်သွင်းကြော်ငြာခြင်းကို ပိုမို ပြုလုပ်လာသည်ကို တွေ့ရှိရကြောင်း၊ အွန်လိုင်းဈေးကွက်တွင် အခမဲ့ကြော်ငြာစုံ ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်သည့် www. ads. Com မှ Country Manager ဖြစ်သူ Mr. Nico Poma က ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 10:03 AM No comments:
လင်းခေးမြို့နယ် ၀မ်စလောင်းကျေးရွာအနီး၌ တရားမ၀င်သစ်ဖမ်းဆီးရမှုနှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက် ခံရမှုဖြစ်စဉ်အပေါ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာနက လင်းခေးခရိုင် လင်းခေးမြို့နယ် ဝမ်စလောင်းကျေးရွာ အနီးတွင် တရားမဝင်သစ် ဖမ်းဆီးရမိမှုနှင့် သစ်တောဝန်ထမ်းများ ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရမှု ဖြစ်စဉ်အပေါ် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို သစ်တောဦးစီးဌာန ရုံးအမှတ်(၃၉) အစည်းအဝေးခန်းမ၌် ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက ကျင်းပရာ သတင်းမီဒီယာများမှ ဖိတ်ကြားထားသူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
စွမ်းဆောင်ရည်မရှိသူကို ချီးမြှောက်ခြင်းသည် တော်နေသူကို အပြစ်ပေးခြင်းနှင့်တူ
မန္တလေး ဒီဇင်ဘာ ၃ဝ
သမ္မတရုံးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလှထွန်းနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး၊ အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီးများက အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဌာနများမှ ဝန်ထမ်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များရှိ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများအား တွေ့ဆုံပွဲကို မန္တလေးမြို့ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီ မြို့တော်ခန်းမ၌ ယနေ့နံနက် ၉ နာရီခွဲက ကျင်းပရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်၊ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမောင်၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ အထက်မြန်မာပြည်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ တိုင်းအဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများမှ ဌာနပေါင်း ၁၃၆ ခုရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း ၆၂၅ ဦး တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
အမျိုးသားပညာရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပ
အခြေခံပညာရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ဆက်စပ်ဥပဒေ (မူကြမ်း)များ ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် အမျိုးသား ပညာရေး စီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ (ဒုတိယနေ့)ကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ ပြည်လမ်းရှိ တက္ကသိုလ် စိန်ရတုခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 9:15 AM No comments:
မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လက်ဆင့်ကမ်း ထမ်းဆောင်ရမည့် တာဝန်ရှိ
လက်ရှိ နည်းပညာခေတ်တွင် အခြေခံလိုအပ်ချက် ဖြစ်သည့် ကွန်ပျူတာများ လှူဒါန်းခြင်းသည် တစ်ဦးချင်း တိုးတက်မှု၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုမှသည် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေချင်သည့် စေတနာဖြင့် ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေသခံများ အနေဖြင့်လည်း အစဉ်အလာ ကောင်းများကို ထိန်းသိမ်း၍ တိုင်းပြည် ဂုဏ်ဆောင်နိုင်သည့် တိုင်းဒေသကြီး တစ်ခုဖြစ်လာအောင် ဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက် စေလိုပါကြောင်းဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ထားဝယ်မြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ကျင်းပသည့် ကွန်ပျူတာနှင့် ကျောင်းသုံး စာအုပ်များပေးအပ် လှူဒါန်းခြင်း အခမ်းအနား အမှာစကား ပြောကြားရာတွင် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ ချီးမြှင့် အပ်နှင်းခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပမည်
၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၄ ရက် (၆၇)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အခမ်းအနားနှင့် ဗိုလ်ရှုသဘင် အခမ်းအနား အပြီးတွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတအိမ်တော် သဘင်ဆောင်၌ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့များ ချီးမြှင့် အပ်နှင်းခြင်း အခမ်းအနားကို ဆက်လက် ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း ၀န်ဆောင်မှုအသစ် အဖြစ် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် အစားအစာများကို မှာယူ စားသုံးနိုင်တော့မည်
မြန်မာ့စာတိုက်လုပ်ငန်း၏ Hometown Product Delivery ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းသစ် (Value Added Service) တစ်ရပ်အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့မှ လူကြိုက်များသော အစားအစာများ ဖြစ်သည့် ပဲပုပ်၊ ခေါပုပ်၊ မုန်ညင်းချဉ်၊ ကြက်သွန်ချဉ်၊ ဆီတို့ဟူး စသည်တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်မြို့မှ လူကြိုက်များသော အစားအစာများ ဖြစ်သည့် ဂျေဒိုးနတ်၊ ပုစွန်ခြောက်၊ ငါးနီ တူးခြောက်၊ အာပြဲခြောက်၊ မုန့်ဟင်းခါးခြောက် စသည်တို့ကို လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီး၏ ဖုန်း- ဝ၁-၃၈ဝ၂၅၇ နှင့် တောင်ကြီး စာတိုက်ကြီး၏ ဖုန်း-ဝ၈၁-၂၁၂၁၅ဝ၆ တို့သို့ ဆက်သွယ် မှာယူပါက လူကြီးမင်းတို့ အိမ်ဂေဟာသို့ ယနေ့ပို့ မနက်ဖြန်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမည့် အမြန်ချောပို့စနစ်ဖြင့် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းသစ် တစ်ရပ်ကို ၁-၁-၂ဝ၁၅ (ကြာသပတေးနေ့) မှစတင်၍ နှစ်သစ်ကူး ဝန်ဆောင်မှု အသစ်တစ်ရပ် အနေဖြင့် မြန်မာ့စာတိုက် လုပ်ငန်းမှ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by moi at 9:14 AM No comments:
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ရယူကာ ဒေသ၏ ထွက်ကုန်များကို တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ အဖြစ် ထုတ်လုပ် ဆောင်ရွက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်သည် အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်မှ ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာလာပြီး ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး တောင်ငူမြို့နယ်ရှိ သောက်ရေခပ်(၂) ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ရန်ကုန်မြို့မှ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများအား တွေ့ဆုံ အမှာစကား ပြောကြား
ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး၊ တရားစီရင်ရေး အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့်‌ မိမိတို့ သက်ဆိုင်ရာ ကဏ္ဍအလိုက် တာဝန်ယူ၊ တာဝန်ခံ ဆောင်ရွက်ရမည် ဖြစ်ပြီး ပွင့်လင်း မြင်သာမှု ရှိမှသာ ဒီမိုကရေစီ အနှစ်သာရ ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်‌ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းက ယနေ့ မွန်းလွဲ(၁) နာရီတွင် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဧည့်ခံခန်းမကြီး၌ ကျင်းပသည့် ရန်ကုန်မြို့မှ လူမှု အဖွဲ့အစည်းများနှင့်‌ တွေ့ဆုံပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြောကြားသည်။
နောင်ချိုမြို့နယ်၌ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုပေါင်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း နောင်ချိုမြို့နယ်တွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၇ ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ဦးစိန်ဝင်း ခေါင်းဆောင်သော မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၆)ခုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု (၃၅)ခုတို့မှ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား (၁၁၀၀၀)ခန့်သည် တောင်းဆိုချက် (၅)ချက် ပါဝင်သော လက်ကိုင် ပိုစတာများ ကိုင်ဆောင်လျက် (၂)နာရီကြာ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုပေါင်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ၏ ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက် ရယူကာ နောင်ချို မြို့မ အားကစားကွင်း၌ စုဝေးပြီး မြို့မ အားကစားကွင်းမှ မန္တလေး- လားရှိုး ကားလမ်းမ တစ်လျှောက်နှင့် မြို့မဈေး တစ်ဝိုက် လှည့်လည် ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
Posted by moi at 8:45 AM No comments:
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများနှင့် တွေ့ဆုံ
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေဖြင့် ၂၀၁၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလကုန် သို့မဟုတ် နိုဝင်ဘာလ ပထမပတ်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား လွတ်လပ် တရား မျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်ရန် ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက် ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ဘက်လိုက်ခြင်း၊ ပွင့်လင်း မြင်သာမှု မရှိခြင်း၊ လွတ်လပ်မှုနှင့် မျှတမှု မရှိခြင်းသည် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် လွှတ်တော်များနှင့် အစိုးရအဖွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာ၊ ပုံရိပ်ကျဆင်း ညှိုးနွမ်း စေမည်ဖြစ်၍ ပွင့်လင်း မြင်သာသည့် လွတ်လပ် တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ လွတ်လပ် တရားမျှတသည့် ရွေးကောက်ပွဲကို ကော်မရှင် တစ်ခုတည်းဖြင့် သာမကဘဲ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများနှင့် ပြည်သူလူထု အားလုံးမှ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားရန် လိုအပ်ကြောင်းဖြင့် ယနေ့မွန်းလွဲ (၂)နာရီက ကရင်ပြည်နယ်၊ ဘားအံမြို့၊ ဇွဲကပင်ခန်းမ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမှတ်(၂) နယ်လှည့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတပ်ခွဲ ဟားခါးမြို့၌ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်
ဟားခါး ဒီဇင်ဘာ ၂၉
အမှတ်(၂) နယ်လှည့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးတပ်ခွဲမှ ဗိုလ်မှူးတင်ထူးဦး ဦးဆောင်သော အဖွဲ့သည် ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် ည ၇ နာရီကဟားခါးမြို့ အမှတ်(၂)အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း ဗိုလ်ကြွမ်ဘိခ်ခန်းမ၌ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြရာ ချင်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းဦး နှင့် ပြည်နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များ စစ်ဗျူဟာအဖွဲ့ အခြေချ(ဟားခါး)မှ စစ်ဗျူဟာမှူးဗိုလ်မှူးကြီးစိုးလှိုင်နှင့် အရာရှိ၊ အရာခံ၊ အကြပ်စစ်သည် တပ်မတော် မိသားစုဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများနှင့် ၀န်ထမ်းမိသားစုများ၊ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် များမှ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ ကြည့်ရှုအားပေး ကြသည်။
Posted by moi at 6:04 PM No comments:
ဟားခါးမြို့၌ မြို့တွင်းလမ်း တိုးချဲ့ အဆင့်မြင့်တင်ရေး ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကျပ်သိန်း(၃၀၀)ထောက်ပံ့
ဟားခါး ဒီဇင်ဘာ ၂၈
ချင်းပြည်နယ်၏ ဟားခါးမြို့၌ မြို့တွင်းလမ်း တိုးချဲ့ အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ပြည်နယ် အစိုးရဘတ်ဂျက်မှ ကျပ်သိန်းပေါင်း(၃၀၀) ထောက်ပံ့ပေးကြောင်း သိရသည်။
Posted by moi at 6:01 PM No comments:
ကော့သောင်းခရိုင်၊ ၂၀၁၅ခုနှစ် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ၀က်သက်နှင့် ဂျိုက်သိုးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး အစုလိုက် ထိုးနှံခြင်း (Advocacy on Measles Rubeller Campain) လုပ်ငန်း အသိပေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲ ပြုလုပ်
ကော့သောင်းခရိုင် အတွင်း၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ ဇန်န၀ါရီလ နှင့် ဖေဖေါ်ဝါရီလ တွင် ပြုလုပ်မည့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း ၀က်သက်နှင့် ဂျိုက်သိုးရောဂါ ကာကွယ်ဆေး အစုလိုက် ထိုးနှံခြင်း (Advocacy on Measles Rubeller Campain) လုပ်ငန်းအသိပေး ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာလ၂၉ရက်နေ့ နံနက် ၁၁နာရီက ကော့သောင်းခရိုင် ၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခန်းမတွင် ပြုလုပ်ကျင်းပသည်။
ကျွန်းစုမြို့နယ် ကံမော်ကျေးရွာ၌ ဘိန်းစာမှုန့်များဖမ်းဆီးရမိ
ကျွန်းစု ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ရက်
ကျွန်းစုမြို့နယ် ကံမော်ကျေးရွာ၌ ဒီဇင်ဘာလ(၂၈)ရက် ညနေ(၃)နာရီက ကျေးရွာအရှေ့ပိုင်းရေဆိပ်တွင် မသင်္ကာဖွယ်လှေတစ်စီးအား သတင်းအရ ရှာဖွေရာ ဘိန်းစာမှုန့်ဟုယူဆရသော စိမ်းဝါရောင်အမှုန့်များ ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း သိရှိရသည်။
ကျေးရွာနေပြည်သူများ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်ရေးအတွက် ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းနှင့် တံတား အဆင့်မြှင့်တင် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာများတွင် ကျေးလက်နေပြည်သူများ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်ရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရန်ပုံငွေဖြင့် တောင်ပုလဲ-ရှမ်းတောင်-မင်းသန်း ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းနှင့် ၎င်းလမ်းပေါ်ရှိ ကွန်ဂရစ်တံတားကို
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ဦးနန္ဒကျော်စွာ မြန်မာနိုင်ငံ ကင်းထောက် အမျိုးသမီးအဖွဲ့နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာ ကင်းထောက် အမျိုးသမီးအဖွဲ့တို့အားတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးနန္ဒကျော်စွာသည် မြန်မာနိုင်ငံ ကင်းထောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ကင်းထောက် ချုပ် ဒေါ်တင်လှကြည်၊ ဒေါ်ခင်စောဥမ္မာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသမီး ကင်းထောက်အဖွဲ့(ယာယီ)တို့နှင့်အတူ ဂျပန်နိုင်ငံ အိုဆာကာ ကင်းထောက်အမျိုးသမီးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Ms.YOKO SHINKE ဦးဆောင်သော အဖွဲ့တို့အား ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော်(C)ဆောင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ကုသရေးကိစ္စများတွင် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီအောင် ရေရှည်စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်းသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ခုတင်(၅ဝဝ) ဆံ့ အထူးကုဆေးရုံကြီးနှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းရှိ ရန်ကုန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး ခုတင်(၁၅ဝဝ) ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း တိုးတက်မှုအခြေအနေများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ခေတ်မီဂျီအိုင်အက်စ်ဓာတ်အားခွဲရုံ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)တွင် တည်ဆောက်နေ
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၉
လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်စိုး သည် ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်း ဦးနှင့်အတူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်အတွင်း တည်ဆောက်လျက်ရှိသော ၂၃ဝ ကေဗွီ/၂ ထ ၁၂၅ အမ်ဗွီအေ GIS ဓာတ်အားခွဲရုံကို ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံ အခမ်းအနား အကြိုလေ့ကျင့်နေမှု ကြည့်ရှု
ဗိုလ်ရှုခံ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းသည် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဗိုလ်ရှုခံမဏ္ဍပ်၌ ၂ဝ၁၅ခုနှစ် (၆၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံ အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အကြို လေ့ကျင့်နေမှုနှင့် အခမ်းအနားအတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု များကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား၏ သတင်းနှင့် ဖျော်ဖြေရေးကဏ္ဍ ရုပ်သံလိုင်း၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁)ရက်နေ့မှ စတင် ထုတ်လွှင့်တော့မည်
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၉
မြန်မာ့အသံနှင့် ရုပ်မြင်သံကြား အနေနဲ့ Analogue စနစ်ဖြင့် တစ်နိုင်ငံလုံးကို လွှမ်းခြုံနိုင်အောင် ထုတ်လွှင့် ပေးလျှက် ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ လ (၁၅)ရက်နေ့မှာ DVB T2 လို့ခေါ်တဲ့ Digital စနစ်ကို စတင် ပြောင်းလဲပြီး Analogue စနစ်ရော၊ Digital စနစ်ပါ ပူးတွဲထုတ်လွှင့်လျှက် ရှိပါတယ်။
ထူးခြားသောဝိသေသများရှိသည့် သမိုင်းကြောင်းအစဉ်အလာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း
နေပြည်တော် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၈
ကြီးမားသော တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တာဝန်ကိုထမ်း ဆောင်နေရသည့် တပ်မတော်သည် ထူးခြားသောဝိသေသများ ရှိသည့်အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိသဘော ဆန္ဒအလျှောက် တပ်မတော်တွင် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ထမ်း ဆောင်ရာတွင် ပင်ပန်းဆင်းရဲမှု ဒုက္ခများစွာ ရင်ဆိုင်ရမည့်အပြင် လိုအပ်ကအသက်ပင်ပေးရမည်ကို သိရှိသော်လည်း မွန်မြတ်သည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ကြည်ဖြူစွာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြခြင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ အစွန်အဖျားမကျန် နိုင်ငံအနှံ့အပြား၌ ကျရာတာဝန်ကို သွားရောက်ထမ်း ဆောင်ရခြင်း၊ လွတ်လပ်ရေးကြိုး ပမ်းမှုမှသည် ယနေ့တိုင်အောင်တပ်မတော်၏သမိုင်းနှင့် နိုင်ငံတော် သမိုင်းတဆက်တစပ် တည်းရှိနေခြင်း စသည့်ထူးခြားသောဝိသေသများရှိသည့် သမိုင်းကြောင်း အစဉ်အလာနှင့် ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လည်း တာဝန်ရှိကြောင်းဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင်မြိတ် တပ်နယ်နှင့် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဘုတ်ပြင်းမြို့နယ်၊ ကရသူရိမြို့နယ်ခွဲရှိ ကျောက်ထနောင်း တပ်နယ်တို့မှ အရာရှိ၊စစ်သည်၊မိသားစုများအား သက်ဆိုင်ရာတပ်နယ်ခန်းမများ၌ တွေ့ဆုံ၍ အမှာစကားပြောကြားရာတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအေးမြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာ အသင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Incentives and Rewards for Occupational And Health ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားတက်ရောက်
အလုပ်သမား၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်သည် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှိုင်မြို့နယ် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာအသင်း၌ ယနေ့နံနက်(၉)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Incentives and Rewards for Occupational And Health ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဟောပြောပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်သည်။
(၆၇)ကြိမ်မြောက် တိပိဋကဓရ ၊ တိပိဋကကောဝိဒ ရွေးချယ်ရေး စာမေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန သာသနာရေးဦးစီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် (၆၇)ကြိမ်မြောက် တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋက ကောဝိဒရွေးချယ်ရေးစာမေးပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ၁၃၇၆ ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်း ၈ ရက် ယနေ့နံနက် (၈)နာရီခွဲတွင် ရန်ကုန်မြို့ သီရိမင်္ဂလာကမ္ဘာအေးကုန်းမြေရှိ ဝိဇယမင်္ဂလာ ဓမ္မသဘင်၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 7:09 PM No comments:
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ မြောင်းမြမြို့နယ် ရွာသာကြီးကျေးရွာ၌ မိုးပွင့်အဆင့်(၇)စီမံချက်ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်ပေးမှု ကြည့်ရှုအားပေး ဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် လိုအပ်သည်များညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေး
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီသည် တာဝန်ရှိသူများနှင့် အတူ ဒီဇင်ဘာ(၂၆)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် မြောင်းမြမြို့ လှေဆိပ်မှ ခရိုင်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနပိုင် ရေယာဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာလာရာ နံနက်(၁၁)နာရီ (၄၅)မိနစ်တွင် မြောင်းမြမြို့နယ် ရွာသာကြီးကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိပြီး ကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းဝန်းအတွင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့်အမျိုးသား မှတ်ပုံတင်ရေး ဦးစီးဌာန ဝန်ထမ်းများက ဒေသခံပြည်သူများအား မိုးပွင့်အဆင့် (၇)စီမံချက်ဖြင့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးနေမှုကို ကြည့်ရှုအားပေးသည်။
(၆၇)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနားဖိတ်ကြားရေး၊ ကြိုဆိုနေရာချထားရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဆပ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပဆောင်ရွက်
နေပြည်တော် ၊ ဒီဇင်ဘာ(၂၈)
(၆၇)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနားဖိတ်ကြားရေး၊ ကြိုဆိုနေရာ ချထားရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဆပ်ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဗိုလ်ရှုခံအခမ်း အနား ရှင်းလင်းဆောင်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဖိတ်ကြားရေး၊ ကြိုဆိုနေရာချထားရေးနှင့် ဖျော်ဖြေရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအေးမြင့်ကြူ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားပါသည်။
အားကစားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီနှင့်အတူ မြောင်းမြမြို့ ရွှေသာလျောင်းဘုရားကြီး ဘက်စုံပြုပြင်မွမ်းမံ အလှူတော်မင်္ဂလာ ရေစက်ချ အခမ်းအနားတက်ရောက်ပြီး မြောင်းမြမြို့ ဒီဇင်ဘာလူထုလမ်းလျှောက်ပွဲနှင့် မြဧရာ အားကစားပွဲတော် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားတက်ရောက်
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၈
မြန်မာနိုင်ငံအိုလံပစ် ကော်မတီဥက္ကဌ အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးတင့်ဆန်းသည် ယမန်နေ့နံက် (၆)နာရီတွင် မြောင်းမြမြို့ ဒီဇင်ဘာလူထုလမ်းလျှောက်ပွဲသို့ ပါဝင်ဆင်နွဲ ပြီးနောက် မြောင်းမြမြို့ ပြည်လုံးချမ်းသာ ရွှေသာလျောင်းဘုရားကြီး ဗုဒ္ဓါဘိသေကအနေကဇာတင်နှင့် ဂန္ဓကုဋိတိုက် မှန်ကျောင်းဆောင် အသစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ ရွှေသင်္ကန်းကပ်လှူခြင်း၊ ဘက်စုံပြန်လည်မွမ်းမံခြင်း၊ အခါတော်မင်္ဂလာရေစက်ချ အခမ်းအနားသို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးဦးခင်ရီနှင့်အတူ တက်ရောက်ကာ မြောင်းမြမြို့ မြဧရာအားကစားပွဲတော် ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားအား ထပ်မံ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
Posted by moi at 6:18 PM No comments:
ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်းမသန်စွမ်းမှု ခံစားရသည့် အာမခံ အလုပ်သမားများအား အကျိုးခံစားခွင့်ပေးအပ်
သထုံ ဒီဇင်ဘာ ၂၆
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ်၊ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ရုံးခွဲမှ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ လူမှုဖူလုံရေး ဥပဒေသစ် အရ အလုပ်ခွင်တွင် ထိခိုက်မှုကြောင့် အမြဲတမ်း မသန်စွမ်းမှု ခံစားခဲ့ရသည့် သထုံဧရာဝတီဘဏ်ခွဲမှ
Posted by moi at 2:15 PM No comments:
ရွှေစာရံစေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်တော်ဖွင့် အထိမ်းအမှတ် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် မြို့လုံးကျွတ် မဟာနိဗ္ဗာန်ဈေးပွဲတော်ကျင်းပ
သထုံ နိုဝင်ဘာ ၂၆
မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့၏ ကျက်သရေဆောင် လေးဆူဓါတ်စံ ရွှေစာရံ စေတီတော်မြတ်ကြီး ရောင်တော်ဖွင့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ဆရာတော်ကြီးများ၏ ဩဝါဒလမ်းညွှန်မှုကိုခံယူကာ မြို့နယ် သံဃာ့နာယကအဖွဲ့၊ စေတီတော် ဘဏ္ဍာတော်ထိန်း ဂေါပကအဖွဲ့နှင့် စေတနာရှင် လူငယ်များ ဦးဆောင်မှုဖြင့် သထုံ မြို့သူ/မြို့သားများ စုပေါင်း၍ မြို့လုံးကျွတ် မဟာနိဗ္ဗာန် ဈေးပွဲတော်ကို ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်က စေတီတော်မြတ်ကြီး ဝန်းကျင်တွင် စည်ကားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
Posted by moi at 1:53 PM No comments:
၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ရုရှားနိုင်ငံ မော်စကိုမြို့၌ ကျင်းပသော Miss Universe ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလှမယ်မိုးစက်ဝိုင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီးနောက် ယခုနှစ် အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ပြုလုပ်မည့် Miss Universe ပြိုင်ပွဲအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့ရာ သျှားထွဋ်အိန္ဒြာ ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည်။ သူမ၏အမည်ရင်းမှာ နန္ဒာကျော်သိန်း ဖြစ်သည်။
''ညီမ ပြိုင်ပွဲအတွက် အချိန်ဇယားနဲ့သေချာလေ့ကျင့်နေပါတယ်''ဟု သျှားက ပြိုင်ပွဲအတွက် ပြင်ဆင်နေမှုကို ပြောပြသည်။
အစိုးရအဖွဲ့ သစ်ကာလအတွင်း အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီးဌာန၏ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေး ဆောင်ရွက်ချက်များ
၁။ စီမံကိန်းများရေးဆွဲခြင်းအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အစီရင်ခံစာများ ပြုစုခြင်း
(Top- Down ) စနစ်ဖြင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းမှ ( Bottom-UP) စနစ်ဖြင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသို့ ပြောင်းလဲကျင့် သုံးခဲ့ပြီး ကဏ္ဍစီမံကိန်းများနှင့် ဒေသန္တရစီမံကိန်းများချိတ်ဆက်မှု စနစ်ကျစေရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
-ပြည်သူများ လျင်မြန်စွာရရှိခံစားစေသည့် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သည့် လျှပ်စစ်မီး၊ သောက်သုံး ရေရရှိရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ အလုပ် အကိုင်ရရှိရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ငွေကြေးလုပ် ငန်း၊ ကုန်သွယ်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများ
၂၀၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အဓိကနိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကို ယှဉ်ပြိုင်ရန်ရှိနေသည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီး အသင်းသည် ဒီဇင်ဘာ၂၇ ရက် (ယနေ့) ညနေ ၄ နာရီတွင် သုဝဏ္ဏကွင်း၌ ခြေစမ်းပွဲကစားမည်ဖြစ်သည်။ မြန်မာအမျိုးသမီးအသင်းသည် ဗီယက်နမ်ကလပ် ဟာနန်းအသင်းနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ကစားမည်ဖြစ်သည်။
Posted by moi at 9:51 AM No comments:
(၆၇) နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနား ၀တ်စုံပြည့် အကြိုလေ့ကျင့်မှုများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၂၆
၂ဝ၁၅ ခုနှစ် (၆၇)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံ အခမ်းအ နား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပ နိုင်ရေးအတွက် ယနေ့နံနက် ၆ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဗိုလ်ရှုခံ မဏ္ဍပ်ရှေ့၌ ဝတ်စုံပြည့် အကြို လေ့ကျင့်မှု များကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက် ကြသည်။
ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်သရုပ်ပြချီတက်အလေးပြုကြမည့် စစ်ကြောင်းများမှ ကြည်း၊ ရေ၊ လေတပ်မတော်စစ်ကြောင်းများ၊ အလံကိုင် တပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကြောင်းများ၊ ဘင်ခရာတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်ကြောင်းများ၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတပ်မတော်အရာရှိ စစ်ကြောင်းများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်း၊
မောင်တောမြို့နယ် ကျီးကန်းပြင် ကျေးရွာအနီး မီးလောင်မှုဖြစ်ပွား
မောင်တော ဒီဇင်ဘာ ၂၆
ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက် ည ၁၀ နာရီခွဲ က မောင်တောမြို့နယ် ကျီးကန်းပြင် ကျေးရွာအုပ်စု အနောက်ရွာနေ ဘော်ရှော၏နေအိမ် မီးကြွင်းမီးကျန်မှ တစ်ဆင့် မီးစတင်လောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ နေအိမ်လေး လုံးပါ ကူးစက်လောင်ကျွမ်းခဲ့ရာ မြို့နယ် မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ မီးသတ်မော်တော် ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် သွားရောက် ငြှိမ်း သတ်မှုကြောင့် ည ၁၀ နာရီ မိနစ် ၄၀ တွင် မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့သည်။
ဝန်ထမ်းနှင့် ပြည်သူများအတွက် အိမ်ရာများရောင်းချပေးမည်
တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၆
ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သည် အေးသာယာမြို့ ဂေါက်ကွင်းအရှေ့ဘက် ရှိမြေ ၄၂ ဒသမ ၁၈၈ ဧကပေါ်၌ ပြည်သူ့အိမ်ရာစီမံကိန်းအဖြစ် လေးခန်းတွဲ ငါးထပ်အဆောက်အအုံ ၁၂၃ လုံး၊ အခန်းအရေအတွက် ၂၄၆၀ ကိုမင်းကျန်စစ်ကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တာဝန်ထမ်းဆောင် နေသည့် ဝန်ထမ်း၊ အငြိမ်းစားများအား အရစ်ကျ ငွေ ချေစနစ်၊ အခန်းပိုင်စနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေး သွားမည်ဖြစ်ပြီး တိုက်ခန်း ဝယ်ယူခွင့်
နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် စစ်တွေမြို့ရှိ မြို့မိမြို့ဖများ၊ ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ
စစ်တွေ ဒီဇင်ဘာ ၂၆
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် သံတွဲမြို့မှ အထူး လေယာဉ်ဖြင့် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ထွက်ခွာ ခဲ့ရာ စစ်တွေမြို့သို့ေ ရာက်ရှိပြီး ထိုမှတဆင့် ရဟတ်ယာဉ် များဖြင့် ထွက်ခွာခဲ့ရာ ကျောက်တော်မြိုသို့ ရောက်ရှိသည်။ ယင်းနောက် နိုင် ငံတော် သမ္မတသည် မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်အား ပန်း၊ ရေချမ်း၊ ဆီမီးနှင့် ရွှေသင်္ကန်းများကပ်လှူပူဇော်ပြီး အလှူငွေ များပေး အပ်လှူဒါန်းသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဆုံး ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာသင်တန်းကျောင်းဖွင့်လှစ်
မန္တလေး ဒီဇင်ဘာ ၂၄
ကိုရီးယား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အေဂျင်စီ (KOICA) နှင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာ နိုင်ငံ အစိုးရတို့၏ ချစ်ကြည်ရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်ဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားသော ရိတ်သိမ်းချိန်လွန် နည်းပညာသင်တန်း ကျောင်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ် ထုံးဘိုခြံတွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီက ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 2:26 AM No comments:
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း မန္တလေးမြို့ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော် မြတ်ကြီးအား ဖူးမြော်ကြည်ညို
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် ညပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့ မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော် မြတ်ကြီးအား သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညို သည်။
Posted by moi at 2:03 AM No comments:
ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုနှင့် ရေငန်ဝင်ရောက်မှုများမှ လျော့ပါးသက်သာစေနိုင်မည့် ဓမင်းဆိပ်ရေတံခါး
ဖျာပုံ နိုဝင်ဘာ ၂၄
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဖျာပုံခရိုင် ဖျာပုံမြို့နယ် အတွင်းရှိ ဇင်းဘောင်ကျွန်းပတ်တာသည် စပါးသီးနှံ အဓိက စိုက်ပျိုးသောဒေသဖြစ်ပြီး အရှေ့ဘက်တွင် ဖျာပုံမြစ်၊ အနောက်ဘက်တွင် ဘုရားကြီးရိုးတာ၊ ငါးကြီးရိုးတာ၊ တောင်ဘက်တွင် လက်ပန်ပင်ကျွန်း၊ မြောက်ဘက်တွင် ဓမင်းဆိပ်ချောင်းများနှင့် ထိစပ်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ဇင်းဘောင်ကျွန်းပတ်တာ အတွင်း နေထိုင်သူများ သည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်၍ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းပါ တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။
Posted by moi at 1:56 AM No comments:
ဒေါ်လာသန်း ၁၀၀ ခန့်ကုန်ကျခံပြင်ဆင်မည့် ရန်ကုန်မြို့မှ အတွင်းဝန်ရုံး (၀န်ကြီးရုံးများ)
ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်ထုတ် ပြင်သစ်နိုင်ငံ သတင်းစာတစ်စောင် ဖြစ်သည့် International New York Times (France) က မြန်မာ နိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကိုလိုနီခေတ် အဆောက်အအုံ များစွာ ရှိသည့် အနက် အတွင်းဝန်ရုံး (ဝန်ကြီးများရုံး)မှာ ထင်ရှားသည့် သမိုင်းဝင် အဆောက်အအုံ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုလိုနီခေတ်က ရန်ကုန်မြို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့တော်ဖြစ်
Posted by moi at 1:52 AM No comments:
တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိမှ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိပြီး တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နိုင်မည်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး ခရိုင်၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်၊ ကျောက်ဆည် ခရိုင်၊ မိတ္ထီလာခရိုင်၊ မြင်းခြံခရိုင်၊ ညောင်ဦးခရိုင်နှင့် ရမည်းသင်းခရိုင်တို့ အတွင်းရှိ မြို့နယ်များမှ တောင်သူလယ်သမားကြီးများ တက်ရောက်ကြ သည့် တောင်သူလယ်သမားရေးရာ လူထုတွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီတွင် မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး စဉ့်ကိုင်မြို့ စံပြကျေးရွာကွင်း၌ ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်နာယက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း တက်ရောက်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
Posted by moi at 1:42 AM No comments:
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ဇနီးနှင့် မိသားစုတို့အား ခရစ်တော်မွေးနေ့အကြို လာရောက်မေတ္တာပို့ဆုတောင်းကောင်းချီးပေး
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၊ ဇနီး ဒေါ်ခင်ခင်ဝင်းနှင့် မိသားစုတို့အား ခရစ်တော်မွေးနေ့အကြိုအဖြစ် မြန်မာ နိုင်ငံ ခရစ်ယာန်ကောင်စီမှ အမှုဆောင်အတွင်းရေးမှူးနှင့် တိုင်းရင်းသားလူငယ်များပါဝင်သော ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက် ခရစ်ယာန် လူငယ် များ ဓမ္မတေးအဖွဲ့က ယနေ့ညနေ ၆ နာရီတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတ အိမ်တော်၌ လာရောက် ကောင်းချီးပေး ဆုတောင်းကြသည်။
Posted by moi at 1:25 AM No comments:
တပ်မတော်(ရေ)၏ လေ့ကျင့်ရေးဗဟိုဌာနကြီးဖြစ်၍ တပ်မတော်(ရေ)အတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် အရာရှိ၊စစ်သည် များလေ့ကျင့်မွေးထုတ်
နေပြည်တော်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄
တပ်မတော် လေ့ကျင့်ရေးတွင် အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးနှင့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေး ဟူ၍ရှိကြောင်း၊ အရာရှိ၊စစ်သည်များစွာကို သင်ကြားပို့ချနေသည့် တပ်မတော်(ရေ)၏ လေ့ကျင့်ရေး ဗဟိုဌာနကြီးဖြစ်၍ တပ်မတော် (ရေ)အတွက် အရည်အချင်းပြည့်ဝသည့် အရာရှိ၊စစ်သည် များလေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်လေ့ကျင့်ရေး ကျောင်းများ၏ အဆင့်အတန်း
(၆၇)နှစ်မြောက် တပ်မတော် (ရေ)နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် စစ်ရေယာဉ်များ တပ်တော်ဝင်ခြင်း အခမ်း အနားသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် တက်ရောက်ဂုဏ်ပြု
နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးသည် နိုင်ငံတစ်ခုအတွက် ဦးစားပေး လုပ်ဆောင်ရမည့် အရေးကြီးဆုံး လုပ်ငန်း တာဝန်ဖြစ်ကြောင်း၊ ၂၀၁၁ခုနှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းချိန်မှစတင်၍ တပ်မတော်၏အဓိက တာဝန်ဖြစ်သည့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ မိမိနိုင်ငံ၏ ကမ်းရိုးတန်းသည် အလျားမိုင်
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ကြီး Mr. Petipong Pungbun Na Ayudhya ၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအကြား လယ်ယာကဏ္ဍပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေး ကွင်းဆင်း လေ့လာ
ရက်စွဲ - ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂၃) ရက်
လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် သည် ၂၀၁၄ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၉)ရက်နေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ ခဲ့ကြပြီး၊ CT Distribution Centre & CM (Chiangmai Frozen Foods Public Co; Ltd) Group ဥက္ကဌ Mr. Prayoon Pholpipattanaphong နှင့် ထိုင်းတပ်မတော်မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Mr. Surassak၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေး နှင့်သမဝါယမဝန်ကြီးဌာနမှ Inspector Mr. Surajit Intarachit, Ms. Yupadee Memarat နှင့် Ms. Puncharat Muansoy တို့နှင့်အတူ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ တန်ချိန် (၂၂၀၀၀) သိုလှောင်နိုင်သည့် ခေတ်မီ အအေးခန်းသိုလှောင်ရုံသို့ သွားရောက် လေ့လာခဲ့ကြပါသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ရေး စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကျင်းပ
နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ နိုင်ငံ့စွမ်းဆောင်ရည်ဆု ချီးမြှင့်ရေး စိစစ်ရွေးချယ်ရေး ကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့မွန်းလွဲ (၁) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ စိစစ်ရွေးချယ် ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီး ဦးတင်နိုင်သိန်း တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်း ၂၀၁၅ခုနှစ် (၆၇)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနား အကြို လေ့ကျင့် နေမှု အခြေအနေများအား ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဗိုလ်ရှုခံ အခမ်းအနားကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဉာဏ်ထွန်းသည် ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဗိုလ်ရှုခံမဏ္ဍပ်၌ ၂၀၁၅ခုနှစ် (၆၇)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဗိုလ်ရှုခံအခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အကြိုလေ့ကျင့်နေမှုနှင့် အခမ်းအနားအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် ထားရှိမှုများအား ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
Posted by moi at 8:41 PM No comments:
ရေဘေးသင့်ပြည်သူများအား မြေနေရာနှင့် နေအိမ်ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကျင်းပ
ကသာ ဒီဇင်ဘာ - ၂၃
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့နယ်၊ ပြည်သာယာကျေးရွာ၊ တံတားဦးအပိုင်း ၌ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအား မြေနေရာနှင့် နေအိမ် (၃)လုံး ပြန်လည်နေရာချထားပေးမှု အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ (၂၃) ရက် နံနက် (၀၉း၀၀)နာရီအချိန်တွင် ကျင်းပခဲ့သည်။
Posted by moi at 10:00 AM No comments:
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သရေစည်သူမင်းအောင်လှိုင် တပ်မတော် သူနာပြုနှင့် ဆေးဘက် ပညာတက္ကသိုလ်သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁၂) သင်တန်းဆင်းဂုဏ်ပြု စစ်ရေးပြအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် မိန့်ခွန်း ပြောကြား
နေပြည်တော် - ဒီဇင်ဘာ- ၂၃
သူနာပြုလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်အရေးပါသည့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်း၊ သူနာပြု များသည် ကရုဏာတရားကြီးမားပြီး ကြင်နာတတ်သူ၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံတတ်သူ၊ စေတနာ ထက်သန်သူ၊ စိတ်ထားမွန်မြတ်သူ၊ အပင်ပန်းအဆင်းရဲခံနိုင်သူ စသည့်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ထူးထူးကဲကဲ ပြည့်စုံသူများ ဖြစ်ကြောင်း၊ စေတနာနှင့်အကြင်နာ ဆိုသည်မှာ အလွန်ထိရောက်သည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုထုံးဖြစ်သည့် အပြင် လူနာ၏ ယုံကြည်လေးစားမှု ချစ်ခင်မှုများကို ရရှိစေနိုင်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် သူနာပြု တစ်ယောက်၏ အပြော အဆို၊ အပြုအမူသည် စိတ်ခွန်အားများပေးနိုင်ပြီး ကုသမှုကို အလွန်ထိ ရောက်စေမည်ဖြစ်သဖြင့် အလေးထား လိုက်နာ ဆောင်ရွက်သွားရန်မှာကြားလိုကြောင်းဖြင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က
သဘောတူညီရန် ကျန်ရှိနေသေးသည့်အချက်များ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်း နှစ်ဖက်လုံးက လက်ခံနိုင်မည့် အချက်များ အဆိုပြုခဲ့ကြ
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတ(Union Peace Making Work Committee) နှင့် တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(Nationwide Ceasefire Coordination Team) တို့ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုအပြီး ဒီဇင်ဘာ ၂၃ ရက် ညနေ ၃ နာရီတွင် ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ကို ထုတ်ပြန် ခဲ့သည်။ ယင်းကြေညာချက်အပြည့်အစုံမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
Posted by moi at 9:56 AM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ကြားရေးဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အထူးအစည်းအဝေးကျင်းပရေး ပထမအကြိမ် အကြိုညှိနှိုင်း စည်းဝေး
ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ကြားရေး ဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ အထူးအစည်းအဝေး (2nd Special SOMRI) ကျင်းပရေး ပထမ အကြိမ် အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို နေပြည်တော်ရှိ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဌာနဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးပိုက်ထွေးက အမှာ စကားပြောကြားရာတွင် (၁၂)ကြိမ် မြောက် အာဆီယံပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး များအစည်းအဝေးနှင့်
Posted by moi at 9:54 AM No comments:
မိုင်းကိုင်မြို့ ၊ ရွှေမြင်ထင်မွေတော် ဘုရားအား ရွှေသင်္ကန်း ပြန်လည် ဆက်ကပ်လှူဒါန်း
မိုင်းကိုင် ဒီဇင်ဘာ ၂၄
ရှမ်းပြည်နယ်၊ လွိုင်လင်ခရိုင် ၊ မိုင်းကိုင်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ရွှေမြင်ထင်မွေတော်ဘုရားကြီးသည် ဗုဒ္စသာသနာတော် သက္ကရာဇ် ၂၃၅ ခုနှစ်တွင် သီရိဓမ္မာသောကမင်းကြီးက ဗုဒ္စမြတ်စွာဘုရား၏ ဓါတ်တော်များကို ဌာပနာပြု၍ တည်ထား ကိုးကွယ်ခဲ့သော သမိုင်းဝင် တန်ခိုးကြီးဘုရား တစ်ဆူဖြစ်ပါသည်။
စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စာကြည့်တိုက်ဖွင့်
ချောင်းဆုံ ဒီဇင်ဘာ ၂၂
ချောင်းဆုံမြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးလက်နေပြည်သူများ အသိပညာ တိုးပွားစေရေး အတွက် ၀ယ်လန်း ကျေးရွာ စာရိတ္တမဏ္ဍိုင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး စာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲကို ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်၊ နံနက် (၁၁း၀၀) နာရီက ကျင်းပရာ မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ထွန်းသိန်း၊ (ပြန်/ဆက်)ဦးစီးမှူး ဒေါ်မိသူဇာနှင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းတို့က ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်။
ပြင်ဦးလွင် နှင်းမြို့တော်တွင် ရှားပါးချယ်ရီပန်းဖြူများ ဝေဝေဆာဆာဖူးပွင့်
ပြင်ဦးလွင် ဒီဇင်ဘာ ၂၂
ပြင်ဦးလွင်မြို့ကို ပန်းပေါင်းစုံ ဝေဆာလှပစွာဖူးပွင့်သော မြို့တစ်မြို့ ဖြစ်သဖြင့် ပန်းမြို့တော်ဟုတင်စား ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ အမည်သညာပေး အသိအမှတ်ပြု၍တင်စား ခေါ်ဝေါ်ကြသလိုပင် ပြင်ဦးလွင်၌ အမှန်တကယ်ပင် သစ်ပင်ပန်းမန်များ ဝေဝေဆာဆာလှလှပပဖြင့် ဖူးပွင့်ကြ ပြီး ထိုအထဲတွင် ရှားရှားပါးပါး ထူးထူး ခြားခြားပန်းများလည်း တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ပိုမို များပြားလာသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
မန္တလေး ဒီဇင်ဘာ ၂၂
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့၏ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီမှ မြရည်နန္ဒာတန်ဖိုး နည်း အိမ်ရာများ ကို ချထားပေးခဲ့ရာ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိသူများအား တိုက်ခန်းနေရာများကို လူကိုယ်တိုင်မဲစနစ်ဖြင့် သတ်မှတ်ရောင်း ချပေးခြင်းကို ဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ၄၈လမ်းနှင့် ယုဇနလမ်းထောင့်ရှိ မြရည်နန္ဒာတန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာရှင်း လင်းဆောင်၌ ကျင်းပသည်။
အစွမ်းထက် တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ ပေါ်ထွန်းလာရေး ညီလာခံများက အထောက်အကူပြု
မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေးပညာ စနစ်တကျ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ထွန်းကား ပြန့်ပွားရေးအတွက် နှစ်စဉ်မပျက် ကျင်းပသော မြန်မာ့တိုင်းရင်းဆေး သမားတော်များ ညီလာခံကို (၁၅) ကြိမ်မြောက်အဖြစ် ယနေ့နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော်ရှိ MICC-2 တွင် ကျင်းပရာ ညီလာခံ တက်ရောက်လာကြသော တိုင်းရင်းဆေးပညာ ဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ တိုင်းရင်းဆေး ဆရာများ၊ တိုင်းရင်းဆေးနှင့် နှီးနွှယ် ပတ်သက် ဆက်စပ်နေသော တိုင်းရင်း ဆေးလောကသားများအား တွေ့ဆုံ၍ ၎င်းတို့၏ အမြင်များကို မေးမြန်းခဲ့သည်။
ပဉ္စမအကြိမ် မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှသည် ရွှေရောင် အနာဂတ်ဆီသို့
''ဂျီအမ်အက်စ်ဒေသတွင် အားလုံး ပါဝင်ခံစားနိုင်ပြီး ရေရှည်တည်တံ့သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ခြင်း'' ဟူသော ဆောင်ပုဒ်ဖြင့် ပဉ္စမအကြိမ် မဟာမဲခေါင်ဒေသခွဲ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု ထိပ်သီး အစည်းအဝေးကို ဒီဇင်ဘာ ၂ဝ ရက်က ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ရှိ ရှန်ဂရီလာ ဟိုတယ် ၌ အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် လက်ပံတောင်း တောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ကာရံရေးလုပ်ငန်းကို ယနေ့ နံနက် ၈ နာရီခွဲက အဖွဲ့(၃)ဖွဲ့ခွဲ၍ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့(၃) သည် ယာယီခြံစည်းရိုး တိုးချဲ့ကာရံ မည့် အင်ကြင်းတောင်အနီးသို့ အရောက်တွင် ရွာသူ ရွာသား ၁၀၀ ခန့်အနက်မှ ရွာသား ၃၀ ခန့်က မြေထိုးယာဉ်ရှေ့၌ ဝမ်းလျားမှောက် လျက် တားဆီးမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ ကြသည်။
Posted by moi at 7:35 AM No comments: